Amaqabane amashishini abathandekayo kunye nabanikezeli ngeenkonzo, Kutshanje, kuye kwafunyanwa ukuba kukho iinkampani nabantu abasebenzisa ngokungekho mthethweni igama lenkampani kunye nedilesi (Shijiazhuang Mets Machinery co., Ltd NO.1 Changjiang Road Shijiazhuang 050035 Hebei China Ifowuni: 86-311-68058177 ) kunye nenye inkampani ...Funda ngokugqithisileyo »
Siyavuyisana nabo basebenza nabo kwisebe lobugcisa ngokuphumelela iti yobugcisa
Ibhaso leqela Siyavuyisana nabo basebenza nabo kwisebe lobugcisa ngokuphumelela ibhaso leqela lobugcisa, namanye amasebe aya kulandela umzekelo wabo. Funda ngokugqithisileyo »
Intwasahlobo iyeza, ixesha lokonwaba!
Intwasahlobo iyeza, ixesha lokonwaba! Onke amahlakani enkampani aqokelele kwimpambano yezitalato iJianhua nasendleleni yesangqa yesibini esemantla. Indlela yethu yokuhamba ngebhayisikile yayikukuqokelela indawo-sithatha ukujika kweHutuo River-Zhengding South Gate -Rhola amanyathelo ethu nawo wonke umntu owayenebhayisekile. Sincokole no e ...Funda ngokugqithisileyo »
Inkampani yethu ibambelela kumxholo wobume bendalo kunye nolondolozo lwezixhobo. Kutshanje imeko yokhuselo lokusingqongileyo imbi, inkampani yethu iyaphendula ngokuqinisekileyo kwaye iqhuba imveliso yokhuselo lokusingqongileyo. 1. Ukuphelisa izibonelelo eziphelelwe lixesha nokwazisa ...Funda ngokugqithisileyo »
Bhiyozela ukuqinisekiswa kabini kwenkampani yethu ngokuzimisela.
U-Hebei Hanchang Minerals Co, Ltd. upasile isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho we-ISO9001, i-OHSAS18001 isatifikethi senkqubo yolawulo lwezempilo kunye nokhuseleko ngoSeptemba 1, 2017. Ibonisa ukuba inkampani yethu ifikelele kumgangatho wamanye amazwe ngokudityaniswa kwemanejala ...Funda ngokugqithisileyo »
Indlela yokukhetha impompo oluludaka?
Xa uphatha i-slurry, abasebenzisi kufuneka bakhethe phakathi kolwakhiwo lwerabha okanye ulwakhiwo lwentsimbi lweempompo zabo zeludaka Eli nqaku libonisa ezinye zokurhweba kunye nokusikelwa umda okunxulumene nokusetyenziswa kwayo nayiphi na kwezi zimbini zempompo yoyilo. Itheyibhile 1 ekuqukunjelweni kweli nqaku ...Funda ngokugqithisileyo »
Izinto zeempompo oluludaka
Impeller Impeller, nokuba yi-elastomer okanye i-chrome ephezulu, lelona candelo lijikelezayo liqhelekileyo elinama-vanes ukunika amandla e-centrifugal kulwelo. I-Casing Split zangaphandle iihafu zokuphosa zinezinto zokunxiba kwaye zibonelela ngoxinzelelo oluphezulu lokusebenza. Istili sha ...Funda ngokugqithisileyo »
Wamkelekile abathengi bamanye amazwe ukuba batyelele inkampani yethu! Funda ngokugqithisileyo »
Uphuhliso loshishino lwempompo kunye nokuphononongwa
Umzi mveliso wempompo we-1.1 unembali ende Impompo ngumatshini omdala. Amazwe aseYurophu umzi-mveliso wokuqala wempompo wakhiwa embindini wenkulungwane yama-20, ngaphezulu kwe-10 njengenkampani yase-United States iWortington yakhiwa ngo-1980, i-Ingersoll Rand-inkampani yakhiwa ngo-1860, ngu-Byron-Jackson comp ...Funda ngokugqithisileyo »
Isebenza njani impompo oluludaka centrifugal?
Njengoninzi lwempompo, impompo yecentrifugal iguqula amandla oomatshini ukusuka kwimoto iye kumandla ombane ohambahambayo; amanye amandla aya kwi-kinetic energy ye-fluid motion, kwaye amanye abe ngamandla anokubakho, amelwe luxinzelelo lwamanzi okanye ngokuphakamisa ulwelo ngokuchasene nomxhuzulane ukuya kwinqanaba eliphezulu. Ngaphezulu ...Funda ngokugqithisileyo »